Revolisiona indostrialy fahefatra: Ny andraikitry ny lozisialy maimaim-poana amin'ity vanim-potoana vaovao | Avy amin'ny Linux
Ireo sehatr'asa mpamokatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao dia miaina fanovana lehibe sy haingana ao anatin'izany Revolisiona indostrialy fahaefatra. Ny revolisiona miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana karazana «nuevas tecnologías» izay mampifandray ny efa misy tontolo ara-batana, nomerika ary biolojika, izay misy akony amin'ny rehetra fifehezana, toekarena ary indostria, ary izany dia mandeha hatrany amin'ny fanamby ny hevitra efa misy momba ny inona Zanak'olombelona.
Ao amin'io Revolisiona indostrialy fahaefatra, ny efa misy Fitaovana fananganana tontolo iainana (Applications, Systems and Platforms) dia «Software Libre y Abierto» ny fananganana ny voalaza «nuevas tecnologías», mamela ny fikambanana mety ho bebe kokoa mifaninana sy mahasoa amin'ireny fotoana ireny. Na dia koa ny olombelona Izy io dia lakile, indrindra amin'ny ambaratonga fanofanana sy fifehezana ireo fitaovana ireo.
Andian-teny: "Ny angona dia menaka tamin'ny taonjato faha-XNUMX" dia misy ifandraisany lehibe amin'izany Revolisiona indostrialy fahaefatra, satria, amin'ity farany ity ary «nuevas tecnologías» tsy amin'ny ambaratonga fiasa ihany, fa amin'ny lafiny tsirairay amin'ny fizotry ny famokarana na famoronana a fikambanana
Ary marina indrindra, ny «Software Libre y Abierto» ao amin'ny fikambanana manamora ny fampiasana isan'andro ireo teknolojia vaovao ireo amin'ny vidiny mora na aotra, ho an'ny tanjon'ny orinasa tsirairay avy.
1 Inona ny revolisiona indostrialy fahefatra?
2 Ny andraikitry ny Rindrambaiko Maimaimpoana amin'ny Tolom-piavotan'ny indostrialy fahaefatra
Inona ny revolisiona indostrialy fahefatra?
4 taona lasa, tamin'ny 2016, nandritra ny Forum toekarena manerantany (Forum Davos) vita ny fehin-kevitra mazava: "Miatrika ny revolisiona indostrialy faha-efatra izao tontolo izao". Tao anatin'izany dia nekena ihany koa fa ny Internet dia zava-misy izay tsy manova ny fiainan'ny olombelona intsony toy ny tamin'ny fiandohan'ny famoronana azy, fa tena zava-misy isan'andro.
Ary tamin'ity forum ity, dia nazava koa fa:
"Misy antony telo tsy anehoan'ny fanovana ankehitriny ny fanitarana ny revolisiona indostrialy fahatelo, fa ny fahatongavan'ny iray hafa: hafainganam-pandeha, habaka ary fiantraikany amin'ny rafitra. Ny hafainganan'ny fandrosoana ankehitriny dia mbola tsy nisy toy izany teo amin'ny tantara… Ary manelingelina saika ny indostria rehetra amin'ny firenena rehetra ”.
Ary arakaraka klaus schwab, Tale Mpanatanteraky ny World Economic Forum ary mpanoratra ny boky «Ny revolisiona indostrialy fahaefatra», ity revolisiona vaovao ity:
"Tsy faritan'ireo teknolojia vao misondrotra isan-karazany no mamaritra azy io, fa ny fifindrana mankany amin'ireo rafitra vaovao izay miorina amin'ny fotodrafitrasan'ny revolisiona nomerika (teo aloha)."
Noho izany, eo amin'ireo maro faritra na haitao mandalo ny ankehitriny Internet na mijanona eo amboniny izy ireo, ary izy ireo no manome vatana na mamaritra mazava an'io Revolisiona indostrialy fahaefatra, azontsika lazaina ny mifandraika indrindra manaraka:
Fitsikilovana sy robotika artifisialy
Ny Internet an'ny zavatra, Internet an'ny olona ary Internet an'ny rehetra
Fandehanana mitokana sy Drôna
Tambajotra 5G sy tambajotra WiFi 6
Quantum sy Cloud Computing
Biotechnology, Nanotechnology ary Neurotechnology
Tele-fitsaboana, Tele-fanabeazana ary Tele-asa
Fianarana lalina sy angon-drakitra lehibe
Fanontana 3D, zava-misy marobe ary zava-misy virtoaly
Ny rafitra angovo vaovao sy ny rafitra fitehirizana
Ny andraikitry ny Rindrambaiko Maimaimpoana amin'ny Tolom-piavotan'ny indostrialy fahaefatra
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha antsoina Rindrambaiko malalaka sy misokatra: fiantraikany ara-teknolojia amin'ny fikambanana lazainay izao manaraka izao:
"Androany dia mazava ho azy fa takatra fa ny fampiasana Fampiharana, Rafitra ary Vahaolana mifototra amin'ny rindrambaiko Maimaimpo sy Misokatra dia manamora sy mampihena ny vidin'ny fampidirana sy ny fizotran'ny fanavaozana eo amin'ny tontolon'ny toekarena nomerika, ary koa ny fandraisana anjaran'ny Free Software Communities an'ny amin'ny alàlan'ny fanavaozana misokatra dia manampy ny Fikambanana handray mora kokoa ny fanovana nomerika".
"Noho izany, tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza izao fa ny Free and Open Software dia manampy ny fikambanana handroso sy handroso amin'ny làlana mankany amin'ny fanovana nomerika, hamaly amin'ny fomba mailaka sy mahomby amin'ny fitomboan'ny fitomboany sy ny hafainganana. fitakiana orinasa".
Ary manonona lisitra lava iray an'ny Fitaovana miorina amin'ny «Software Libre y Abierto» izay ahafahan'ny orinasa mitazona hatrany ny daty, izany hoe ao anatin'ny maoderina teknolojia amin'ny vidiny mirary. Lisitra izay anoloranay hevitra mba hijerena sy hitazomana hatrany.
Na izany aza, te-hanampy an'ity lisitra ity antso iray indray izahay OpenIL (Open Industrial Linux), izay tsy inona akory, hoy ny mpamorona azy:
"Sehatra rindrambaiko misokatra ho an'ny automatisation indostrialy".
Taty aoriana, azo antoka fa amin'ny lahatsoratra hafa, hiresaka amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba izany isika, fa amin'izao kosa dia azontsika atao ny manazava izany «OpenIL», dia Distribution Linux mifantoka amin'ny automatisation indostrialy ary noforonin'ny orinasa NXP Semiconductors, mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny vahaolana azo antoka amin'ny fifandraisana.
Ary azo antoka fa io ihany, no manamarika azy «Software Libre y Abierto», mandritra ny 3 taona izao, fiandohana, làlana, azo antoka ary mahomby amin'ny fironana vaovao an'ny automatique indostrialy ao anatin'ny Revolisiona indostrialy fahaefatra.
Ahoana no ahitantsika, ny Revolisiona indostrialy fahaefatra Eto ary ankehitriny, tondraka ny ankehitriny. Ary tsikelikely dia mandentika antsika amin'ny fanovana lehibe izay mandrisika fomba vaovao mahita sy manao ny fiainantsika ity. Antenaina fa ny mitovy tsy miaraka amin'ny «Software Libre y Abierto»fa ho azy filozofia sy fahalalahana, mitondra tombony bebe kokoa ho antsika noho ny fahasimbana ao anatin'ny fotoana fohy, na amin'ny lafiny tsirairay na amin'ny fiaraha-miasa, mba hahatratrarana tontolo tsaratsara kokoa ho an'ny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Revolisiona indostrialy fahefatra: Ny andraikitry ny lozisialy maimaim-poana amin'ity vanim-potoana vaovao ity
Google dia namoaka ny kinova Mendel Linux 4.0 vaovao